Degmada Taleex Oo Laga Taageeray Midaynta Gobolada Sool Iyo Sanaag(sawiro) | RUUG-CADDAA
Degmada Taleex Oo Laga Taageeray Midaynta Gobolada Sool Iyo Sanaag(sawiro)
Posted by Iftiinshe on October 30th, 2015
Waxaa magaalada taariikhiga ah ee Taleex lagu qabtay maalintii ay bishu ahayd 29/10/2015 shirweyne aad u ballaadhan oo lagu taageerayey midaynta gobolada Sool Iyo Sanaag oo dhawaana lagu wado in loo sameeyo maamul dhamaystiran, isla markaasina waafaqsan dastuurka dawlada federaalka soomaaliya.
Shirweynahaasi waxaa ka soo qayb galay aqoonyahano, odayaal wax garad ah,culimada diinta islaamka,, haweenka iyo qaybaha kala duduwan ee ururada ka hawlgala degmada taariikhiga ah ee Taleex, dadweynihii shirkaasi waxay dhamaantoodba isku raaceen inay ku niyadsan yihiin midaynta maamul goboleedka Maakhir iyo Khaatumo.
Waxaa kaloo ay intaasi ku dareen in la soo gaadhay xilligii labadaasi beelood ee walaalaha ahi ay u samaysan lahaayeen maamul goboleed u gaar ah, oo aysan taladiisa iyo hirgalintiisana cidna u daba fadhiisanaynin, maadaama ay haystaan dekadii iyo khayraadkii dabiiciga ahaa.
Odayadii goobtaasi ka hadlay waxaa kale oo ay xuseen in ay noqon doonaan maamul ay ummada soomaaliyeed u aydo, ku faraxdo, ku barwaaqoowdo maadaama ay haystaan khayraadkii dabiiciga ahaa ee beesha caalamkuna isha ku haysey….
Ugu dambayntii waxay ku soo gunaanadeen ducooyin iyo in uu ilaahay ka dhigo kii guulaysta, waxaanay ballan qaadeen hadii shirkaasi laysla garto in taleex lagu qabto, in ay soo dhawayn doonaan maadaama ay khibrad iyo waaya aragnimo u leeyihiin qabashada shirarka miisaanka culus…
« Horgale Cabdinaasir Garaad Abshir Saalax Oo Xil Madhan Loo Magacaabay
Colaadda Suuriya oo gashay weji hor leh »